Amazon ọ na-atụle ịkwụ ndị mmadụ ụgwọ iji wepụta nchịkọta? | ECommerce ozi ọma
Amazon ọ na-atụle ịkwụ ndị mmadụ ụgwọ iji wepụta nchịkọta?
Eva Maria Rodriguez | | Eziokwu na akụkọ, eCommerce, Ndị egwuregwu dị ọcha
O yiri ka Amazon na-emepe emepe a ngwa mkpanaka site na nke ọ ga-akwụ ndị mmadụ n'otu n'otu, kama ụgbọ njem, maka nnyefe nke nchịkọta, dị ka a kọrọ si Wall Street Journal. Nke a echetarala m ọrụ nke anyị kwuru maka Eprel gara aga, ọkachasị gbasara ya Ngwugwu. O yiri ka inwe ndị ọrụ ilekọta ịnakọta na ibuga ngwugwu.
N'ihe banyere Amazon, ọ na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ ga-achọ enyemaka nke ere ahịa n'obodo mepere emepe ịchekwa ngwugwu, ikekwe site na ịgbazite oghere ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ a ọrụ kwa ngwugwu. Otú ọ dị, ọ dị ka Amazon achọghị ikwu okwu n'okwu a. Okwu a bụ na ọrụ a ga - enye Amazon ikike ị ga - ejikwa ahụmịhe ịzụ ahịa ma nyere ya aka idobe ọnụ ahịa ụgbọ mmiri, nke gbagoro n'afọ gara aga.
Ajụjụ buru ibu bụ: nke a ọ ga - adị ire? Dị ka onye ọrụ nke Adịchaghị Ahịa na Spain, aghaghị m ịsị na enwere m afọ ojuju maka ọrụ ahụ. Sọọ Ọ na-agwa m ozugbo e nyefere ngwugwu ahụ, enwere m ike ịgbanwe ụbọchị nnyefe ma ọ bụrụ na m nwere mmasị na amaara m nwoke nnyefe ahụ, onye, ​​n'aka nke ọzọ, nwere ike ịmata ya nke ọma, yana uwe ya, ụgbọ ala ya, obere igwe ya akara nnata, wdg. Na nke a na-akwụghị ụgwọ mbupu na ịnweta ngwugwu n'echi ya ma ọ bụrụ na anaghị m anọ karịa 6 ma ọ bụ 7 n'ehihie n'usoro.
Ma gịnị kpatara m ga-eji tụkwasị onye m na-amaghị onye ọ bụ na ebe o si nweta ngwaahịa ahịa? N'ihe banyere PackagePeer, dịka ọmụmaatụ, nke a bụ nkwekọrịta nke ị na-eguzobe n'ihi na ị nwere mmasị, ma ị na-eme ya na onye ọ bụla. Mana nke a dị m ka ọ bụ isi na akụkụ nke Amazon (n'ihe metụtara mmekọrịta ya na ndị ọrụ njem) dị ka ihe nzuzu.
Anyị ga-eche ihu ka otu akụkọ a si gosi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » Ndị egwuregwu dị ọcha » Amazon ọ na-atụle ịkwụ ndị mmadụ ụgwọ iji wepụta nchịkọta?
A mụrụ BranTube, a StartUp na-ejikọ youtubers a ma ama na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ
Wayook na-emechi agba mbu nke ego ya ruru euro 640.000